Mashandisiro emagetsi ekushandisa magetsi ekushandura?
Transformer kumhepo yemuchina ndiyo inonyanya kukoshesa kugadzirwa kwemidziyo mukugadzira dhiraivha. Kuita kwayo kwemhepo kunotema kunoona chimiro chemagetsi cheshanduri uye kana coil yakanaka. Parizvino, kune matatu marudzi emuchina wemuchina wekuchinjisa ...
Silicone yakapinda muhupenyu hwedu nenzira dzakasiyana. Izvo zvinoshandiswa zvemafashoni uye maindasitiri machira. Kunge elastomers uye ma rubber anoshandiswa kune adhesive, bonding vamiririri, machira emicheka, machira ekubatanidza uye vatengesi veSeum. Nepo mvura uye emulsions inoshandiswa machira kupera, fiber lubricants uye p ...
resin-yakashandurwa silicone fluid
resin-yakashandurwa silicone fluid, senge rudzi rutsva rwemachira rinopfavisa, rinobatanidza iro rechitema ne organosilicon kuita kuti mucheka unyoro uye utariswe. Polyurethane, inozivikanwawo sekuti resin. Nekuti iine huwandu hukuru hwevanoshanda zvakanyanya ureido uye Amine-format esters, inogona kuyambuka link yekuumba mafirimu ...
Yedu yazvino D4 bvunzo mushumo inoenderana neazvino chirevo
Yedu yazvino D4 bvunzo mushumo inoenderana neazvino chirevo Download
Svitsa mutemo unowedzera iyo inodzorwa chinhu D4 mukushambidza mafuta ekuzora, D5, inoshanda muna Ndira 31, 2018
- D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) D4 - D5 (Decamethylcyclopentasiloxane) D5 - D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) D6 Kudzivirira kweD4 uye D5 mune Zvako Kuchengeta Zvigadzirwa: Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) uye Danho reX recythylx reXththth reXththth recythth recythixth.